Ny fetibe teatra kilasika mahaliana indrindra amin'ny fahavaratra any Espana | Vaovao momba ny dia
Sary avy amin'ny Tickets Olmedo.es
Satria amin'ny fahavaratra i Espana dia tsy miaina amin'ny masoandro sy morontsiraka fotsiny, mandritra Mandritra ny vanim-potoana fahavaratra dia fetibe ara-kolotsaina maro no atao manerana ny firenena ho an'ny mpijery rehetra. Ny fetibe teatra, indrindra, no iray amin'ireo malaza indrindra ary andro vitsivitsy dia maro ny tanàna no lasa ivon'ny zavakanto fampisehoana.
Raha sendra fahavaratra ity dia te-hilona zavatra mihoatra noho ny ranomasina ianao, avy eo Manolotra fety amin'ny teatra maromaro izahay izay mampanantena fa hampifaly ny mpitia kolontsaina.
1 Fetiben'ny Olmedo Klasika
2 Fetibe teatra kilasika Alcántara
3 Fetibe iraisam-pirenena amin'ny teatra kilasika any Mérida
4 Fetibe teatra kilasika Olite
Fetiben'ny Olmedo Klasika
Manomboka amin'ny 15 ka hatramin'ny 24 Jolay, ny Fetiben'ny Teatra Classical ao Villa del Caballero dia haneho seho roa ambin'ny folo amin'ny fanontana iraika ambin'ny folo miandraikitra orinasa teatra maro izay maneho fisafidianana tsara ny tsara indrindra azo jerena ankehitriny amin'ny resaka teatra kilasika.
Mandritra izay folo andro izay dia ahitanao izao tanàna kely any Valladolid tolo-kevitra samihafa an'ny mpanoratra, vanim-potoana, karazana ary firenena izay mizara kalitao amin'ny toe-javatra tena ilaina izao. Misy zava-doza, tantara an-tsehatra ary hatsikana fa ity fanontana ity dia natokana ho an'i Miguel de Cervantes sy William Shakespeare, olona roa lehibe amin'ny literatiora manerantany izay mankalaza ny faha-zato taonan'ny fahafatesan'ity taona ity.
Espana, Angletera, Italia ary France, ireo faritany efatra lehibe an'io teatra maoderina eropeana io, dia hisolo tena an'i Olmedo Clásico, miaraka amin'ny sanganasan'i Lope de Vega, Carlo Goldoni, Tirso de Molina ary Molière, ankoatry ny maro hafa. Toy izany koa, hisy ny kaonferansa amin'ny teatra kilasika hijerena ireo olana samihafa mifandraika amin'ny lahy sy ny vavy. Ary koa fampirantiana sary sy fizarana natokana ho an'ny ankizy hitaona azy ireo hiakatra an-tsehatra.
Fetibe teatra kilasika Alcántara
Sary avy amin'ny fizahan-tany Extremadura
Ny Alcántara Classical Theatre Festival dia heverina ho iray amin'ireo zava-dehibe indrindra amin'ny firenena noho ireo hetsika manodidina ny festival, ny atin'ny fandaharana ao aminy ary ny toerana tsy manam-paharoa hitazonana azy: ny gallery Carlos V an'ny Conventual de San Benito.
Ity festival teatra ity dia teraka tamin'ny taona valopolo taona, nandritra ny fizahan-toetra ny teatra ary iray amin'ireo hazakazaka lava indrindra any Espana. Androany dia ankalazaina mandritra ny vanim-potoana fahavaratra, amin'ny andro voalohan'ny volana aogositra. Amin'ireto daty ireto, ny tanàna dia voaravaka toa tanàna medieval tanteraka, rivo-piainana tsy manam-paharoa mety amin'ny fampisehoana an'ity hetsika ity ary hankafizanao hetsika hafa hafa toy ny lalana Alcántara tapas, ny tsenany antenatenany na atrikasa ho an'ny zanany.
Manomboka amin'ny 3 ka hatramin'ny 8 aogositra, mankalaza ny andiany faharoa amby telopolo ny Alcántara Classical Theatre Festival miaraka amin'ny sangan'asa toy ny 'El cerco de Numancia', 'Reina Juana' ary 'El Retablo de las Maravillas', ankoatry ny hafa.
Fetibe iraisam-pirenena amin'ny teatra kilasika any Mérida
Roa arivo taona taorian'ny nanokanana azy dia velona kokoa noho ny hatramin'izay ny Theatre Romana any Mérida noho ny Fetibe Iraisam-pirenena amin'ny teatra klasika any Mérida. Klasika, maoderina ary tsy manam-potoana, adjectives telo izay mamaritra ity hetsika ara-kolontsaina ity izay manokatra tsingerina vaovao miaraka amin'ny fanontana faha-62 natao teo anelanelan'ny 6 Jolay sy 28 Aogositra.
Ity 2016 The International Classical Theatre Festival of Mérida ity dia manolotra premieres fito tanteraka sy kaonseritra symphonic izay manjaka ny fanoloran-tena amin'ny karazan-karazan-dehilahy sy lohateny izay tsy nisolo tena an'i Mérida hatrizay.
Ho fanampin'izany, ireo tarehimarika avy amin'ny teatra, mozika na dihy toa an'i Paloma San Basilio, Verónica Forqué, Estrella Morente, Aída Gómez, Ara Malikian, Aitor Luna na Unax Ugalde ankoatry ny maro hafa, dia hiakatra eo amin'ny kianjan'ny Roman Theatre of Mérida hisolo tena ireo tantara ireo alohan'ny mpijery an-jatony izay mameno ny tanàna isan-taona.
Hatramin'ny nanombohan'ny festival ny diany tamin'ny taona 30, miaraka amin'ny fandefasana ny edisiona dia nanjary fanendrena fahavaratra tsy azo ihodivirana ary amin'ny iray amin'ireo hetsika ara-kolontsaina manan-danja sy manan-danja indrindra any Espana.
Fetibe teatra kilasika Olite
Sarin'ny ivelan'ny Royal Palace of Olite, ao Navarra
Manomboka amin'ny 17 Jolay ka hatramin'ny 2 Aogositra, ny renivohitra taloha amin'ny fanjakan'ny Navarra dia ho lasa renivohitra ara-kolontsaina amin'ny fotoan'ny Fetiben'ny Teatra Classical Olite. Mandritra ny roa herinandro eo ho eo, ny sanganasa tsara indrindra ataon'ireo mpanoratra tantara an-tsehatra malaza toa an'i Calderón de la Barca, Shakespeare, Tirso de Molina ary Molière dia hotanterahina alohan'ny rindrin'ny Royal Palace tsara tarehy.
Ny festival dia manana dingana roa misokatra malalaka hanehoana ireo fiasa: ny iray izay miorina ao Cava (natao ho an'ny famokarana manan-danja indrindra satria manana fahaiza-manao lehibe kokoa) ary ny iray ao amin'ny Lapa. Mandritra izany andro izany dia haseho amin'ny besinimaro ny 'Entremeses' malaza nataon'i Cervantes, 'El Príncipe' nataon'i Machiavelli ary ireo loza mahatsiravina 'Oedipus the King', 'Medea' ary 'Antígona'.
Ny programa Olite Classical Theatre Festival dia vita amin'ny fampisehoana, fihaonambe ary hetsika fiofanana eny an-dalambe sy amin'ny tambajotra samihafa ao an-tanàna natao ho an'ny mpihaino na matihanina amin'ny teatra rehetra.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny dia » Tanànan'ny Espana » Ny fetibe teatra kilasika mahaliana indrindra amin'ny fahavaratra any Espana
Brihuega, dia fitsangatsanganana ho an'ny saina any La Alcarria